Gamtaan Aworooppaa fi Hindiin biyyoota xiyyaara Booyiing 737 Maaks 8 balaliisuu dhoorkanitti dabalaman – Fana Broadcasting Corporate
Gamtaan Aworooppaa fi Hindiin biyyoota xiyyaara Booyiing 737 Maaks 8 balaliisuu dhoorkanitti dabalaman
Finfinnee, Bitooteessa 4, 2011 (FBC)-Dalibata darbe xiyyaarri Booyiing 737 Maaks 8 osoo Finfinneerraa gara Naayiroobiitti imalaa jiruu Bishooftuutti kufee caccabuun balaa dhaqqabeen lubbuu namoota 157 galaafachuusaan walqabatee Ityoophiyaa dabalatee biyyoonni idil addunyaa baay’een xiyyaara kanatti fayyadamuu dhaabuu beeksisaniiru.
Biyyoota Booyiing 737 Maaks 8 fayyadamuu dhoorkan keessaa isaan adda dureen Chaayinaa, Awustiraaliyaa, Indooneezhiyaa, Jarmanii fi Biritaaniyaadha.
Yeroo ammaa kanaa kaasee Gamtaan Aworooppaa fi Hindiin biyyoota xiyyaara gosa kanaatti fayyadamuu dhoorkanitti dabalamuun isaanii ibsameera.
Biyyoonni idil addunyaa baay’een xiyyaara gosa kanaatti fayyadamuu dhoorkan illee Ameerikaan garuu ammas xiyyaarri kun balaliif mijataadha jettee mirkaneessaa jirti.
Waldaan Balaliistotaa Ameerikaa kan CWA jedhamu garuu bulchiinsi Aveeshinii Federaalaa gaaffilee itti baaya’achaa jiran ilaalcha keessa galchuun xiyyaara kana yeroof hojii dhaabsisuu akka qabu gaafateera.
Minsteerri Siivil Aveeshinii Hindii xiyyaara Booyiing 737 Maaks 8 jedhamutti fayyadamuu hatattamaan akka dhaabu beeksiseera.
Ibsi ministeerri kun baase akka mul’isutti hanga nageenyummaan xiyyaara kanaa qilleensa irratti mirkana’uutti Hindiin itti fayyadamuu akka hin qabneedha.
Eejansiin Aveeshinii Gamtaa Aworooppaa akka murtee dabarsetti biyyoonni miseensa gamtaa kanaa ta’an yeroof gosa xiyyaara kanatti akka hin fayyadamne akeekkachiisa dabarseera.
Sudaan Kibbaa imbaasii ishee biyyoota alaatti argaman 39 cufuufi
Ammeentan gabraa dabaluun balaan qaqqabsiisu hamaa akka ta’e ibsame
Traamp Iiraan akeekkachiisan
Ameerikaan baqattootarratti fooyyessa imaammataa taasisuufi
Googil, Huwaawen Andirooyid akka hin fayyadamne dhoorke
Manni Maree Ministirootaa murteewwan addaddaa dabarse
Ityoophiyaa haaraan kan hunda keenya qixa keessummeessitu-…